मन्त्रीका कुरा सुनेर सचिवले जिब्रो टोके
काठमाडौं, ९ चैत्र । नवनियुक्त मन्त्रीहरु यतिवेला धमाधम मातहातका कर्मचारीहरुसँग ब्रिफिङ् लिन व्यस्त छन् ।
उनीहरुले यो एक हप्तामा व्रिफिङ लिने र बधाई थाप्ने काम गरिरहेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरुले त सचिवको व्रिफिङ सुनेपछि त्यो भनेको के हो ? भनेर सोध्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयकै बारेमा उनीहरुलाई प्राविधिक ज्ञान समेत नभएको बुझिएको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा दुई चारजना मन्त्रीहरु अनुभवी छन् । तर, कतिपय नयाँ अनुहारमा भने अझैपनि ज्ञानको कमी देखिएको सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरुले गाँईगुँई कुरा गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रीहरु जतिवेला पनि व्रिफिङ र अनुगमनमा मात्रै व्यस्त छन् । मन्त्रीहरुको यो पारा देखेपछि कर्मचारीहरुले हेप्ने खतरा बढेको छ । यही पाराले कसरी मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्ला त ? भन्ने चर्चा उठिरहेको छ ।
कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, आरोपहरु प्रमाणित गर्छौं : महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
रामहरी खतिवडाले प्रतिस्पर्धी यज्ञराज सुनुवारलाई भने, “बरा बिचरा ! आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट नै हाल्न पाउनुहुन्न, कसरी जित्नुहुन्छ ?”
जहाँ २ नबज्दै अस्पताल छाड्छन् चिकित्सक : ‘गरिबको अस्पताल भनेको त होईन रहेछ’
विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्न अध्यक्ष केसीको आह्वान
इतिहासमै पहिलोपटक देशमा बाम सरकार बन्दैछ : प्रचण्ड
काँग्रेसले आत्म समिक्षा गरेर तेस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिनु पर्छ: नेत्री डा.संग्रौला